यस्तो बन्यो ‘मलाई माफ गरिदेउ’ को पन्जाबी भर्जन (भिडियो)
काठमाडौँ, ८ वैशाख । पछिल्लो समय पुरानो गीतको कभर बनाउने चलन धेरै नै चलिरहेको छ। कभर गीतको मोह अहिले राम्रै चलिरहेको छ । कभर गीतकै क्रममा स्वर सम्राट नारायण गोपालको आवाजमा सजिएको लोकप्रिय गीत...
सुनिता र पेपराजको चोरुलुङ पार्कमा त्रिभुवनको अभिनय
काठमाडौं, ८ वैशाख । गायिका सुनिता संयक र पेपराज माबोहाङको स्वरमा रहेको ‘चोरुलुङ पार्क’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सोमबार गायक राजेश पायल राईले एक कार्यक्रमबीच उक्त म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका...
सुन्दरी मोडल लक्ष्मीसँग रोमान्स गर्दागर्दै भेटीए ह्याण्डसम मोडल जिम्बे
काठमाडौं, ८ वैशाख । गीतकार तथा मोडल जिम्बे राईको नयाँ गीत माया बिछट्टैको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । राईकै शब्द सृजनामा तयार पारिएको माया बिछट्टै बोलको गीत रिलिज गरिएको छोटो समयमा नै ट्रेण्डिङमा आएको...
केकी अधिकारीले कसिन् सुटुक्कै लगनगाँठो
काठमाडौँ । नायिका केकी अधिकारीले लगनगाँठो कसेकी छन् । वुधबार अधिकारीले आफ्ना प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी हुन् । उनीहरुले आफ्ना सिमित आफन्तहरुका बीच विवाह गरेका हुन् । अधिकारीले विवाहका आफ्ना तस्वीरहरु भोलि सार्वजनिक...
सरुँ सरुँ’ भन्दै चियाबारीमा निराजन र मिरुना
काठमाडौँ, ७ वैशाख । निराजन प्रधान र मिरुना मगरले पहिलो पल्ट जोडी बाँधेको म्युजिक भिडियो ‘सरुँ सरुँ लाग्यो’ सार्वजनिक भएको छ । राजेश पुमा राईको निर्देशन रहेको गीतमा चियाबारीका सुन्दर दृश्यमा मायाको कुरा गरेका...
तिमीलाई हेरेरको साथमा आईन सुशिला बराल ( भिडियो )
काठमाडौँ, ७ वैशाख । स्मारिका ढकाल र रंजित पौडेल फिचर्ड गायिका सुशिला बरालको तिमीलाई हेरेर बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। प्रेमिल शैलीको यस गीतमा स्वयम् गायिका बरालको शब्द, संगीत रहेको छ। यस गीतलाई...
इन्द्रेणीका कृष्ण कंडेल र मन्जु पौडेलको कडा दोहोरी, गुल्मी महोत्सबको अन्तिम दिन इन्द्रेणी टिमको बब्बाल रमाइलो
गुल्मी, ७ वैशाख । गुल्मी महोत्सवको अन्तिम समापनको दिन ईन्द्रेणी टिमका कलाकारहरु आउने भएको छ । कृषि पर्यटन र उद्योगको व्यापार प्रर्वद्धन गर्न भन्दै सञ्चालन भएकोे चौथो गुल्मी महोत्सवको समापनको दिन बैशाख ६ गते...
चर्चित अभिनेत्री काजल अग्रवालले छोरो जन्माइन्
काठमाडौं। दक्षिण भारतीय फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री काजल अग्रवाल आमा बनेकी छन्। उनले मंगलबार छोरो जन्माएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बलिउडमा स्पेशियल २६, सिंघमलगायतका फिल्ममा अभिनय समेत गरेकी उनले २०२० मा व्यापारी गौतम किचलूसँग...
कुमार मोक्तान अभिनित ‘दोर्जे डन ब्याक अगेन’ युटुब ट्रेण्डिङमा
काठमाडौं, ७ वैशाख । तामाङ मेगास्टार कुमार मोक्तान र नायिका सिता लामा अभिनित तामाङ कथानक चलचित्र ‘दोर्जे डन ब्याक अगेन’ युटुबको ४४ ट्रेण्डिङमा आएको छ । ओेएसआर डिजिटलबाट सार्वजानिक गरिएको उक्त चलचित्र युटुबमा अपलोड...
गायिका सुशिला बरालको ‘तिमीलाई हेरेर’ सार्वजनिक ( भिडियो )
काठमाडौँ, ६ वैशाख । गायिका सुशिला बरालको सुमधुर स्वरमा समावेश ‘तिमीलाई हेरेर’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। प्रेमिल शैलीको यस गीतमा स्वयम् गायिका बरालको शब्द, संगीत रहेको छ। यस गीतलाई महाराज थापाले संगीत...
यस्तो छ एमालेको नयाँ चर्चित चुनावी गीत (भिडियोसहित)
नेकपा एमालेको नयाँ चर्चित चुनावी गीत ‘मेरो देशै एमाले, म त यसै एमाले’ सार्वजनिक भएको छ । ‘मेरो देशै एमाले, म त यसै एमाले’ बोलको गीतमा बद्री पंगेनी, रामजी खाँण, कुलेन्द्र विश्वकर्मा, पूर्णकला...
दर्शकलाई आकाश र सृजनाको ‘बसन्ती’ कोसेली
काठमाडौँ, ६ वैशाख । आकाश श्रेष्ठ र सिर्जना कार्की अभीनित ‘बसन्ती’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतलाई आकाश पाण्डेले निर्देशन गरेका हुन् । आकाश पाण्डे फिल्म निर्मातासमेत हुन् । उनले यसअघि निखिल...
काठमाडौं महानगर: कोर एरियामा स्थापितको सानदार अग्रता
काठमाडौं अपडेट: स्थापितको वडामा को अगाडि ?
काठमाडौं अपडेट: कोर एरियामा स्थापित पक्कड बनाउँदै
के एमाले विभाजन गर्दाको पश्चातापमा छन् झलनाथ खनाल?
गगन थापाको क्षेत्रको वडामा एमालेको सानदार क्लिन स्वीप
कर्णालीको राजधानी विरेन्द्रनगरमा एमालेले फर्कायो गुमेको विरासत, मेयर र उपमेयरमा निर्वाचित
काठमाडौँको मेयरमा अग्रता लिइरहेका बालेनको परिवारमा थपियो अर्को खुशी
काठमाडौँमा बालेन र सुनिता कति मतले अघि छन् ?
पोखरामा ५३ हजार मतगणना हुँदा कस्को कति ?
मोरङको उर्लाबारीको मेयर र उपमेयरमा एमाले विजयी
यौन हिंसापीडित युवतीसँग माफ माग्दै के भनिन् माल्भिका सुब्बाले ?
नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा एमाले विजयी